Galaxy S9 Plus မှာ Fortnite Android ဂိမ်းကစားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ်ထွက်လာ – DigitalTimes.com.mm
Galaxy S9 Plus မှာ Fortnite Android ဂိမ်းကစားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ်ထွက်လာ
admin Aug 09, 2018
ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာက ဒီနေ့ Samsung Galaxy Note9ထွက်တဲ့အချိန်မှာ Android တွေအတွက် Fortnite ဂိမ်းလည်း တရားဝင်ထွက်မယ်လို့ပါ။ ထွက်ပေမယ့်လည်း ပထမဆုံး ရက် ၃၀အတွင်းကတော့ Note9ဖုန်းတွေအတွက်သီးသန့်ပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုမှာ Fortnite for Android ကိုကစားပြတဲ့ဖုန်းက ထွက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S9 Plus နဲ့ဖြစ်လို့ Note9တွေအတွက်သီးသန့်အရင်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်က စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ။
အရင်တစ်ခေါက်က XDA developer တွေတွေ့ခဲ့တဲ့ source code အတိုင်းဆိုရင် Google Pixel2XL တို့ Essential ဖုန်းတို့မှာလည်း ကစားလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် OnePlus6ကတော့ စာရင်းထဲမှာပါမလာပါဘူုး။ နောက်ပိုင်းတော့ Essential ဖုန်းတွေလည်း စာရင်းထဲမပါဘူးလို့သတင်းထွက်လာပါတယ်။
XDA team အနေနဲ့ Oneplus6မှာ Fortnite ဂိမ်းဆော့ကြည့်တဲ့အခါ ဒီလို Error ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။
ရှင်းလင်းအောင်ပြောရရင်တော့ Fortnite for Android ကိုဆော့ဖို့အတွက် ဖုန်းတွေအကုန်လုံးကို root ဖောက်ထားရတာပါ။ OnePlus6မှ Error တက်နေတယ်ဆိုတာက ဖုန်းရဲ့ မော်ဒယ်လ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ User root ဖောက်ပြင်ဆင်ထားလိုက်လို့သာ ခွင့်မပြုတော့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်း XDA ကတော့သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဆိုတော့ သဘောက Fortnite for Android က Note9တွေအတွက် သီးသန့်တရားဝင်ထွက်လာနိုင်ပေမယ့် တခြားဖုန်းတွေမှာဆော့ချင်ရင်တော့ Root ဖောက်ဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။
XDA Developer ရဲ့ဝဘ်ဆိုးမှာတော့ Android ဖုန်းတွေမှာ ဒီဂိမ်းဆော့ထားတဲ့ပုံတွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ Samsung Galaxy Note9တွေအတွက် သီးသန့်အရင်ထွက်လာမယ့် Fortnite Android ကတော့ ဒီနေ့ပဲမြင်ရတော့မှာဖြစ်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်ကြပါလို့….
ကြှနျတျောတို့မြှျောလငျ့ထားတာက ဒီနေ့ Samsung Galaxy Note9ထှကျတဲ့အခြိနျမှာ Android တှအေတှကျ Fortnite ဂိမျးလညျး တရားဝငျထှကျမယျလို့ပါ။ ထှကျပမေယျ့လညျး ပထမဆုံး ရကျ ၃၀အတှငျးကတော့ Note9ဖုနျးတှအေတှကျသီးသနျ့ပဲဖွဈမယျထငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုထှကျလာတဲ့ဗီဒီယိုမှာ Fortnite for Android ကိုကစားပွတဲ့ဖုနျးက ထှကျပွီးသားဖွဈတဲ့ Samsung Galaxy S9 Plus နဲ့ဖွဈလို့ Note9တှအေတှကျသီးသနျ့အရငျထှကျမယျဆိုတဲ့အခကျြက စဉျးစားစရာဖွဈလာပါပွီ။
အရငျတဈခေါကျက XDA developer တှတှေခေဲ့တဲ့ source code အတိုငျးဆိုရငျ Google Pixel2XL တို့ Essential ဖုနျးတို့မှာလညျး ကစားလို့ရနိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ OnePlus6ကတော့ စာရငျးထဲမှာပါမလာပါဘူုး။ နောကျပိုငျးတော့ Essential ဖုနျးတှလေညျး စာရငျးထဲမပါဘူးလို့သတငျးထှကျလာပါတယျ။
XDA team အနနေဲ့ Oneplus6မှာ Fortnite ဂိမျးဆော့ကွညျ့တဲ့အခါ ဒီလို Error ပွနတောတှရေ့ပါတယျ။
ရှငျးလငျးအောငျပွောရရငျတော့ Fortnite for Android ကိုဆော့ဖို့အတှကျ ဖုနျးတှအေကုနျလုံးကို root ဖောကျထားရတာပါ။ OnePlus6မှ Error တကျနတေယျဆိုတာက ဖုနျးရဲ့ မျောဒယျလျကွောငျ့မဟုတျဘဲ User root ဖောကျပွငျဆငျထားလိုကျလို့သာ ခှငျ့မပွုတော့တာဖွဈနိုငျကွောငျး XDA ကတော့သုံးသပျထားပါတယျ။
ဆိုတော့ သဘောက Fortnite for Android က Note9တှအေတှကျ သီးသနျ့တရားဝငျထှကျလာနိုငျပမေယျ့ တခွားဖုနျးတှမှောဆော့ခငျြရငျတော့ Root ဖောကျဖို့လိုမယျဆိုတဲ့သဘောပါ။
XDA Developer ရဲ့ဝဘျဆိုးမှာတော့ Android ဖုနျးတှမှော ဒီဂိမျးဆော့ထားတဲ့ပုံတှကေိုမွငျနိုငျပါတယျ။ Samsung Galaxy Note9တှအေတှကျ သီးသနျ့အရငျထှကျလာမယျ့ Fortnite Android ကတော့ ဒီနပေဲ့မွငျရတော့မှာဖွဈလို့ စိတျလှုပျရှားစှာနဲ့စောငျ့ကွပါလို့….
Fortnite for AndroidSamsung Galaxy Note 9
Vivo ရဲ့ ဖုန်းများအတွက် Android Pie ကို ကွာတား ၄ မှာ ဖြန့်ချီမည်
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်၊ တန်ဖိုးနည်း စမတ်လက်ပတ် Mi Band3(Budgeteer)